IOS 15 ayikholisi futhi lokhu kuboniswa ngamanani ayo wokufaka | Izindaba ze-IPhone
IOS 15 ayikholisi futhi lokhu kuboniswa ngamanani wokufakwa kwayo
UJordi Gimenez | | iOS 15
Akukhona ukuthi yizindaba okufanele zixwayise i-Apple kude nayo kepha kubonakala sengathi ukufakwa kwe-iOS 15 kumadivayisi we-Apple kuhamba kancane kunokulindelekile. Abasebenzisi abaningi balinde ukubuyekeza futhi lokhu kubonakala ezibalweni zokutholwa kohlelo olusha lokusebenza lwe-Apple.
Isizathu salokhu kulinda kubasebenzisi abaningi asicaci. Kungahle kube ngenxa yezinguquko ezenziwe kusiphequluli, ngenxa yokunganaki okulula noma ngoba besaba ukwehluleka okungenzeka kule nguqulo yohlelo lokusebenza. Masikhumbule ukuthi inkinga ukuvula nge-Apple Watch lapho sigqoka imaski. Ngokungangabazeki i-bug ebalulekile eholele izinkulungwane zabasebenzisi abangakwazanga ukusebenzisa lo msebenzi ngenxa yokwehluleka kusibuyekezo.
Ukwamukelwa kwe-IOS 15 kusahamba kancane uma kuqhathaniswa ne-iOS 14
Ngemuva kwamasonto amabili kwethulwe ngokusemthethweni, izibalo zokufaka ze-iOS 15 zisesezingeni eliphansi kakhulu kunokujwayelekile kuqhathaniswa nezinguqulo ezintsha ezazikhishwe yi-Apple. Le yimininingwane enikezwa yinkampani yokuhlaziya iMixpanel futhi ekhombisa amawebhusayithi afana ne- 9To5Mac.
Manje le datha ikhombisa ukuthi abasebenzisi abangu-8,59% kuphela ababuyekeze amadivayisi abo ku-iOS 15 kungakapheli amahora angama-48 kwethulwe ngokusemthethweni. Lesi sibalo uma siqhathaniswa nesikhathi esifanayo enguqulweni edlule siphansi kakhulu, nge-iOS 14 emahoreni angama-48 alandelayo ibivele ifakiwe ku-iPhone ngabasebenzisi abangu-14,68%. Imininingwane icacile futhi ngoLwesibili, Okthoba 5, izibalo zokufakwa zime kuma-22,22% esewonke, ngenkathi ku-iOS 14 okufanayo ngo-Okthoba 5, 2020, 41,97% yabasebenzisi abane-iOS 14 bafinyelelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » IOS 15 ayikholisi futhi lokhu kuboniswa ngamanani wokufakwa kwayo
Yebo, lokho akuphoqelekile kepha kuyakhethwa ukuvuselela (hhayi njengakuqala) ngokuqinisekile kunokuthile okuphathelene nenkinga. Iningi labantu lihlanjalazwa ngokushintsha i-OS
Mina, ngabuyela ku-14.8 ngenkathi i-apula lisayisayina.
Kwamanye amadivayisi awukwazanga ukuphendula imilayezo evela kusikrini esikhiyiwe, uvule futhi uphendule (noma ngabe kuyashesha, kudlala isikhathi) kokuthile obekulula phambilini.
I-beta yesithathu ye-iOS ne-iPadOS 15.1, i-tvOS 15.1 ne-watchOS 8.1 yabathuthukisi isiyatholakala
I-Telegram ithole abasebenzisi abasha abayizigidi ezingama-70 ngesikhathi sengozi ye-WhatsApp